MY REMEMBRANCE: အလင်္ကာကြီးကို ဘယ်လိုမျက်နှာပြမလဲ
Posted by puluque at Saturday, June 20, 2009
ပဲခူးသား ပီသပါပေတယ်၊ (ပွဲကြိုက်တာကို ပြောတာပါ)
ဆက်ရေးပါဦး။ Blog ပေါ်မှာ သဘင်အကြောင်းရေးတာ ဒါပထမဆုံးဖတ်ဖူးတာပဲ။
ကိုယ်လဲ ငယ်ငယ်က ဇာတ်ပွဲတွေ လူကြီးတွေနဲ့ လိုက်ကြည့်ဖူးတာ သတိရမိတယ်။ ဒါပေမယ့် ပုလုလို မကြိုက်လို့လား မသိဘူး။ ဘာမှ မှတ်မိတော့ဘူး။ ပွဲခင်းထဲမှာ တချိန်လုံး အိပ်နေတာပဲ မှတ်မိတော့တယ်။
ဖိုးသင်္ကြန်ပြောတာ ဟုတ်တယ် ကိုပုလုကွေးရေ သဘင် အကြောင်းသိပ်မဖတ်ရဘူး ဘလော့မှာ..
မှတ်မိသမျှ ခံစားမိသမျှတွေ ဆက်ရေးပါအုံး
ကိုပုလုကြီးရေးမှ မေ့ကိုသတိရသွားတယ်။ ရွှေမန်းမှ ရွှေမန်းလေ။ ရွှေမန်းဇာတ်ဝင်ပြီဟေ့ဆို ရှေ့က ဖျာဝယ်ပေးထားမှ။ မ၀ယ်ပေးထားရင် အိမ်ပေါ်ကပစ္စည်း အိမ်ရှေ့မှ ကောက်ပေရော့တဲ့။ မေက ၀င်းဗိုလ်ကြိုက်တာဗျ။ ချမ်းသာကတော့ အကတော်တယ်ဗျာ။ ဇာတ်သဘင်မတိမ်ကောအောင် စောင့်ရှောက်ဖို့ ကြိုးစားရင်ဇာတ်သဘင်လည်းပျောက်သလောက်ရှိနေပါပြီ။ မန္တလေးမှာဆိုလည်း လမ်းတိုင်းနီးနီးလောက် အငြိမ့်ပွဲရှိတဲ့ ပွဲချိန်တွေကိုလွမ်းမိတယ်။ အမာစိန်ကတာလေး လက်ကလေးချိုးတာလေးကို လှလွန်းလို့ဆိုပြီး ငေးဖူးတယ်။ အခုတော့..အားလုံး ဝေးးးးးးးးး
plz share, if u found more.
I like lay lay chan.
တော်လိုက်တာဗျာ ၊၊ တော်တော် မှတ်မှတ်သားသား ရှိတာပဲနော် ၊၊ ကျွန်တော်မှတ်မိတာကတော့ ကိုသိန်းဇော် နှစ်ပါးသွားပါပဲ ၊၊ ရွှေမန်းက အဒေါ်တစ် ယောက်ကတော့ အသေကြိုက်တယ် ၊၊ အခုရွှေမန်း မျိုးဆက်ထိ အားပေးနေဆဲလေ ၊၊
အခုလို ပိုစ့်လေးတင်ပေးတာ ကောင်းတယ်ဗျ ၊၊ ကျွန်တော်တို.က သိပ်မသိဘူး ၊၊
ယနေ့ခေတ်ကွယ်ပျောက်လုနီးပါးဖြစ်နေတဲ့ ရှေးဇာတ်သဘင်တွေအကြောင်းအဆင်ပြေရင် ထပ်ရေးပါအုံး
အဟေဟေ ကျနော်က ပွဲဆိုသေချာတခါမှ မကြည့်ဖူးဘူးဗျ။ ကိုပုရေးတာ ဖတ်ပြီး ကြည့်တောင် ကြည့်ချင်လာပြီဗျာ
ဟုတ်ကဲ့ ကျတော် ဇာတ်ရူးပါတယ်ခင်ဗျာ..ရူးဆို ကျတော့ ဘကြီးက ဇာတ်ဆရာကိုး..။ ရခိုင်ပြည်နယ် အခြေစိုက် ရှားပါးလှတဲ့ ဇာတ်တွေထဲက တစ်ခုကို ကျတော်ဘကြီးက တည်ထောင်ထားပါတယ်....။
ကျတော့ကို ဇာတ်ရူးလို့ပြောတာ ဘယ်သူဆိုတာ သိသပ။ (နာမည်မပါပေမဲ့)။ ကျတော့ကို အဲဒီလို ပြောလို့ စိတ်မဆိုးပါ..။ ကျတော် ရွှေမန်းဇာတ် အခွေဖွင့်တာ များလွန်းလို့ ..နားညီးလို့နဲ့ တူတယ်..ဟုတ်လား သယ်ရင်း...
တီဗွီမှာလာရင်တောင် အိပ်ပျော်သွားတတ်တာ .. အိမ်ရောက်ရင် ကြည့်ကြည့်မယ်လေ :D
ငယ်ငယ်က အဖေကဇာတ်ကန်ထရိုက်တွေဆွဲတဲ့ထဲပါတော့ ဇာတ်နဲ့ရင်းနှီးပါတယ် ဇာတ်ရုံနောက်ထဲဝင်ပြီး မင်းသမီး မင်းသားတွေကို နီးနီးကပ်ကပ်မြင်ရတာကိုပဲ ဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပေါ့ ... သိန်းဇော် နဲ့ ချမ်းသာခေတ်မှာ
yamin nwee said...
သဘင် အကြောင်း တင်ပါဦး
တင် မောင်ဆန်းမင်း နှစ်ပါးကလည်း ကောင်းပါတယ်
စိန်မဟာ နောက်ပိူင်းဇာတ်တွေလည်း တော်တော်လေးကောင်းတယ်